‘प्रदेश सरकार अब तिव्र गतीमा अगाडि बढ्छ’ | खबर कुञ्ज
सुदूरपश्चिममा प्रदेश सरकार गठन भएको दुई बर्ष ८ महिना पुगेको छ । धनगढीमा रहेको प्रदेशको अस्थायी राजधानी कैलालीकै गोदावरी नगरपालिकाको जंगल क्षेत्रमा स्थायी रुपमा घोषणा भएको पनि दुई बर्ष पुगिसकेको छ ।
तर दुई बर्षमा वन क्षेत्रमा पर्ने राजधानी तोकिएको जग्गा प्रदेश सरकारले प्राप्ती समेत गर्न सकेको छैन् । प्रदेश सरकार गठन भएपछि समग्र सुदूरपश्चिमको विकास हुने अपेक्षा गरिएकोमा त्यसो नहुँदा आम जनतामा निराशा बढेको छ । प्रदेश सरकारको मध्यान्तरसम्मको कार्यकाल कस्तो रह्यो ? सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसंग गरिएको कुराकानी :
पहिलो पटक प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाउँदा के थिए तपाईंका योजना ?
विगतमा काठमाडौँको नजर कहिले पनि सुदूरपश्चिममा पुगेन् । यहाँको प्राकृतिक स्रोतलाई पहिचान गर्ने र परिचालन गर्ने काम विगतमा नभएको र विकास नभएको कारणले पनि यहाँको समग्र विकासका लागि योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच थियो ।
सामाजिक विकास पनि हाम्रो प्रमुख प्राथमकितामा थियो । स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रको समग्र विकासका लागि थुप्रै योजना पनि बनाएका थियौँ । अहिलेको संघीयताले नै समग्र प्रदेशको विकास हुन्छ भन्ने कुरा स्थापित गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी समेत हाम्रो काधमा थियो । अहिले सोही योजना अनुसार अगाडि बढिरहेका छौ ।
प्रदेश सरकार के संघ र स्थानीय सरकारको चेपुवामा त परेको होईन ?
चेपुवामा परेकै हो त भन्न मिल्दैन् । तर एउटा कुरा के सत्य हो भने नेपालमा पहिलेदेखि नै नेपाल सरकारको रुपमा व्यवस्था चलिरहेको थियो । ठ्याक्कै स्थानीय तह नै नभए पनि स्थानीय निकायको पनि पूरोनो व्यवस्थामा पनि भएकाले स्थानीय सरकार पनि धेरै नयाँ हो भन्न मिलेन् । प्रदेश सरकार भने नयाँ भयो ।
भौतिक संरचना, प्रशासनिक व्यवस्थापन सबै नयाँ मात्रै थिएन् यस्को अनुभव पनि हामीसंग थिएन्। यो व्यवस्था नयाँ भएको तर समग्र प्रदेशवासीले सबैभन्दा बढि आशा र अपेक्षा भने प्रदेश सरकारबाटै बढि गरेका थिए । हिजोका सरकारले केही गर्न नसकेको कारण पनि आशा बढि प्रदेश सरकारमाथि थियो होला । तर त्यो अपेक्षा अनुसार काम गर्न केही समस्या सृजना भए ।
संविधानले दिएका अधिकारी कार्यान्वयनमा संघीय सरकारले गरेको ढिलाईले नै केही समस्या भएको हो। संघीय सरकारले प्रदेशको अधिकारी कार्यान्वयनमा अवरोध नगरे सहज हुने थियो ।
यो मध्यान्तरसम्मको आफ्नो कार्यकाललाई स्वमूल्यांकन गर्दा के भन्नुहुन्छ ?
हामी राजनीति गर्ने व्यक्तिहरुलाई जनताले नै हो मुल्याङकन गर्ने । जहाँ सम्म आधा कार्यकालको कुरा छ, संघीयताको संस्थागत विकास गर्ने कुरा, प्रदेश संरचनाको व्यवस्थापन गर्ने कुरा, योजना निर्माण गर्ने र सम्रग विकास गर्नका लागि केही आधारशिला हामीले तयार गरेका छौ । स्थायी राजधानी र नामाकरणको विषय हामीले छिटो नै छिनोफानो ग¥यौ र अहिले सो निर्णय कार्यान्वयनको चरणमा छ ।
हामीले धेरै अन्य काम अगाडि पनि बढाएका छौ । यस्को परिणाम केही समयपछि आउने भएकाले हामी यो कार्यकाललाई सन्तोषजनक छ भनेर भन्न सक्छौ । पूर्ण रुपबाट सन्तुष्ट हुने कुरा र हामीले राखेको लक्ष्य ढाई बर्षमै पूरा हुन नसक्ने भएकाले पूर्ण रुपमा सफल भयौ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन् । अहिलेसम्म सन्तोषजनक रुपमा अगाडि बढेका छौँ र अब तिव्र गतीमा अगाडि बढ्ने योजना पनि बनाएका छौ ।
संघीयता संघको खटनमा रहँदा काम गाह्रो भएको हो ?
एकात्मक व्यवस्थामा संञ्चालित रहँदा अभ्यस्त रहेका सोच र चिन्तनहरु अहिले पनि परिवर्तन नहँुदा समस्या भएको छ । भएका व्यवस्था र अधिकारी दिन पनि संघीय सरकार हिचकिचाएको छ । संविधानमा एकल अधिकार र साँझा अधिकार स्पष्ट रुपमा छुट्याईएको छ । तर पनि साँझा अधिकारी कार्यान्वयन गराउनका लागि संघीय सरकार डराईरहेको छ ।
विकास निर्माण गर्दा अहिले नै स्थानीय र प्रदेश सरकार आत्मनिर्भर बन्न नसकेको अवस्था हो । त्यसैले वित्त व्यवस्थापनमा पनि केही समस्या देखिन्छ । हिजो विकासको दृष्टिकोणले पछाडि परेको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो । तर त्यो पनि हुन सकेको छैन् । यसलाई हल गर्दै जानुपर्ने आवश्यकता छ । यस्ले संघीय व्यवस्थालाई थप बलियो बनाउनेछ ।
लक्ष्मण थारुले भने, ‘बालुवाटारबाट फैसला लेखेर पठाइयो, विद्रोह गर्छाै’
धनगढीका विजयेन्द्र र श्वेताको काठमाडौँमा रिसेप्सन पार्टी (फोटोमा हेर्नुहोस)
धनगढीबाट उदाएकी भलिबल स्टार सरस्वती
कुन वार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ?
प्रचण्ड जस्तो इमान्दार अरु कोही छैनन्ः नेपाल
सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा अनुपस्थित !
कञ्चनपुरमा युवती मृत भेटिइन्
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा १० वर्ष मुनिका बालबालिकामा सबैभन्दा बढी कोरोना संक्रमण कुन जिल्लामा कति ?
खोला नाला अतिक्रमणले निम्त्याएको क्षणभरकै बर्षाले धनगढी डुवान
धनगढीमा श्वेता र विजयेन्द्रको रिसेप्सन पार्टी (फोटोमा हेर्नुहोस)
कैलालीमा बाढीका कारण ६३२० घर परिवार प्रभावित
निर्मला हत्याको दुई बर्ष पुग्न लाग्दा गाँठो फुकाउन कस्सिए आईजीपीः अनुसन्धान टुंगो लगाउन दुई डीआईजीलाई निर्देशन
‘निर्मला हत्याकाण्डले सधैं बिझाइरहनेछ’